Isi na peeji nke: Mkpebi — HunterThinks.com
Justine si Amazon chọrọ ndepụta
Justine has an Amazon Wish List that includes groceries, ihicha onunu, na ihe maka onye ọ bụla na ya na ezinụlọ ya.
Donald opi lynching: m mmeghachi omume ịdị adị nke Jeremaya mere
The kasị mkpa nke dịkọrọ ndụ ụwa: na-egosi
21 Ka 2018 21 Ka 2018
Iji ghọta ihe mere na dịkọrọ ndụ ụwa jupụtara na-enweghị isi mgbu, cheta na ụmụ mmadụ na-enweghị ike na-egosi dabeere na-eme mkpebi mee.
Veronika jụrụ gị aka Hunter adị ndụ
13 Ka 2018
Hi, aha m bụ Veronika, M German na m zutere Hunter afọ atọ gara aga na a mbikọ na m njem Mexico. Anyị nwere nri ụtụtụ ọnụ, na-ekwu ma na-achị ọchị a ọtụtụ. N'ehihie na m njem. Ma ọ bụ nanị ụfọdụ kilomita. Mgbe ahụ, m bịara azụ ụlọ mbikọ. Gịnị? N'ihi na m nwere mmetụta,
Nkịta na-ekpe ikpe ụmụ mmadụ site otú anyị si emeso ndị ọzọ
12 December 2017 07 March 2017
Cheta na ụmụ mmadụ akpa nkịta site bibiri ozuzu nkịta nke na-na-achọsi ike ma ọ bụ ụmụ mmadụ na-dị ka omume. The nhọrọ maka mmadụ-dị ka omume mgbe ụfọdụ elezighị, dị ka mgbe nna nna anyị hà họrọ nkịta na mmadụ-dị ka na-eghe ughere: nkịta na ụmụ mmadụ bụ naanị umu na ike enwetaghị eghe ughere si ọzọ di iche iche. (caveat: recent research might have found
Noam Chomsky na Madison na Aristotle
12 December 2017 31 January 2017
Guantanamo Ex-ejide Reunion
12 December 2017 26 January 2017
Kpọrọ asị People Ka Die mee elu mee ala, Ebe a bụ Gịnị
12 December 2017 08 January 2017
1 2 … 59 Osote →